Usengundingasithebeni odingisiwe - Ilanga News
Home Izindaba Usengundingasithebeni odingisiwe
UMnu Mathenjwa uthi wazithintela iminyovu ngokupheka ibambabukhosi ngemibuzo emhlanganweni
UMNU Mdabe Mathenjwa othi “wadingiselwa” ukuxina ibambabukhosi ngemibuzo emhlanganweni.
USENGUNDI-NGASITHE-BENI owesilisa waseManyiseni, eNgwavuma, owanikwa umyalelo wokuqoqa yonke imithwalo yakhe afulathele izwe lakwaMathenjwa emuva kokufakelwa incwadi yesivimbelo senkantolo yibambabukhosi elimsola ngokulihlukumeza.
UMnu Mdabe Mathenjwa (34), wayalelwa yiNkantolo yeMantshi yaseNgwavuma ukuba angaphinde abonakale kule ndawo ngoba ibamba likhala ngokuthi ulehlisa isithunzi, futhi waphinde wadunga umhlangano owawumhla ka-18 kuNhlangulana (June) woku-dingida udaba lokubuyiselwa esi-khundleni kwenduna eyayisolwa ngokuthuka amalungu omndeni wasebukhosini nalo ibamba uqo-bo.
Wabizelwa enkantolo mhla ka-7 kuNtulikazi (July), okuyilapho kwaphasiswa khona lesi sivimbelo. UMdabe uthi wazithintela imi-nyovu ngokupheka ibamba ngemibuzo kulo mhlangano wamhla ka-18 kuNhlangulana.
ILANGA lizibonile izithombe-mnyakazo (videos) lapho uMdabe exina ngemibuzo ibamba ethi kwenziwa yini libenemihlangano ethinta indlunkulu yakwaMathe-njwa kodwa amalungu ayo enge-kho.
Uphinde ezwakale elitshela ukuthi seliphelelwe yisikhathi so-kubamba lesi sihlalo ngoba umnikazi waso, uMnu Khulasibone Mathenjwa – ozalwa yinkosi Mbe-kwane owashona ngo-2003 – usekulungele ukuhlala kusona.
Ibamba laphakanyiselwa kulesi sihlalo ngo-2016 ngesikhathi isizwe sakwaMathenjwa sisagutshuzelwe yizinkinga zo-mbango wesihlalo.
Ekhuluma neLANGA uMdabe, uthe wazama ukuse-dlulisa isinqumo senkantolo kodwa kwanga-lunga.
“Mina ngiya-ye ngikhulume ngento engino-bufakazi bayo. Ubaba uNdumo waphaka-nyiselwa esi-bayeni (esigo-dlweni) eku-Hlehleni ne-ndodana ye-nkosi uKhulasibone ngo-2016, satshelwa ukuthi uzobamba iminyaka emibili.
“Ngesikhathi ngimphonsa imi-buzo, ngangifuna ukwazi ukuthi kungani ehamba ngemuva aba-ntwana basendlunkulu eseyohla-ngana nomuntu owethuka indlu-nkulu.
“Inkantolo yachema naye nga-xoshwa-ke endaweni, kwathiwa ngingaphinde ngilubeke olwami unyawo, kungenjalo ngizothathe-lwa izinyathelo zomthetho. Noma ngabe kushoniwe emndenini wami, kangiyi. Nginezingane ose-kuphele izinyanga ngingakwazi ukuzibona,” kusho uMdabe.
Uthi ngaphambi kokuba afike enkantolo kuyodingidwa udaba lwencwadi yesivimbelo, wathola ucingo olumbizela kwenye indawo yezokuvakasha, kwafonelwa isi-khulu saseNkantolo yeMantshi ya-seNgwavuma kwathiwa makabha-le incwadi yokuxolisa futhi anco-me ibambabukhosi.
“Kwathiwa ngisho nokusho ukuthi ngangithunyiwe ukuba ngipho-nse le mibuzo. Isono sami wukwe-nqaba ukubhala leyo ncwadi. Phakathi kwezinqumo ezatha-thwa, kukhona esithi ngingaphi-nde ngiye ekhaya eManyiseni. Inkinga akushiwongo nokuthi ngi-gwetshwa isikhathi esingakanani,” kusho uMdabe.
Ibambabukhosi litshele leli phephandaba ukuthi lona ngeke likhulume ngalolu daba ngoba se-lwedlula futhi inkantolo yathatha isinqumo esifanele.
“Kangikhulumi ngezindaba ese-ngadlula kuzo,” kusho ibambabu-khosi maqede lavala ucingo.
USihlalo weNdlu yabaHoli bo-Mdabu KwaZulu-Natal, iNkosi Phathisizwe Chiliza, uthe kawu-kho umthetho ogunyaza ukudingi-swa komuntu uma ephonse imibuzo efuna ukucaciseleka ngezinto ezithile. Uthe izinkinga zidalwa wukuthi imindeni eminingi kayisakwazi ukuhlala ikhulume, ilu-ngise izinkinga zayo.
“Kulolu daba lwakwaMathe-njwa, kubukeka umndeni uhluleka wukuzixazululela izinkinga zawo njengoba kufakwana ezinka-ntolo. Kulesi simo akukho emthe-thweni ukuthi kungavalwa umu-ntu ukuba angabe esaxhumana ngisho nomndeni wakhe ngoba na-khu efune izincanzelo ngokuthile.
“Ngokujwayelekile umuntu uya-ye axoshwe endaweni uma kuwukuthi kunamalungu omphakathi anganelisekile ngokuziphatha kabi kwakhe, okungaba wukubulala abantu, okanye ukuntshontsha imfuyo yabantu.
“Nakhona kulesi simo, kusuke kufanele ngabe kubekwa isikhathi esithile ukuze kubonakale ukuthi umsolwa uyayishintsha yini indlela yokuziphatha kwakhe. Akukho emthethweni ukuthi kungaxoshwa umuntu ngoba nakhu kungagculi-sekile umuntu oyedwa ngaye.
“Ngokomnyango nokulawulwa kwethu, kuyaye kubenezikhathi ezithile ezibekwayo uma kuphaka-nyiswa umuntu ozobamba isihlalo futhi akufanele anqabe uma ese-khulile lowo asuke emubambele,” kusho iNkosi uChiliza.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Senze-lwe Mzila, uthe kuzokwenziwa uphenyo emuva kwalokho kubhe-kwe kabanzi ukuthi ngabe kukhona yini lapho isinqumo siphambe-ne khona nomthetho.
Next articleUPHUME NGOSHWELE UZUMA EJELE